Falin Fl-2020 Compact Automatic Haingam-pandeha ambony Fanamainana tanana ara-barotra sy tokantrano, ABS Cover 110v/220V 1200W
Fanamarinana: ce, RoHS, CCC
Hery (W): 1200
Volavola (V): 220
Laharana maodely: Fl-2020
Induction Distance: 5-20 (cm)
Fanaraha-maso ny rano: IPX1
teo aloha: Mpivarotra ambongadiny ny Mount Dryer - FALIN FL-2112B Hotel Fanamainana volo, Rindrina fanamainana volo, ABS plastika fanamainana volo - Falin
Manaraka: Falin FL -2101A 1300-Watt Fanamainana volo mangina mipetaka amin'ny rindrina 1300W
Mifantoka amin'ny mpanjifa foana, ary ny tanjonay farany dia tsy ny mpamatsy azo itokisana indrindra, azo itokisana ary marina, fa koa ny mpiara-miombon'antoka ho an'ny mpanjifanay amin'ny vidiny ambany orinasa China Commercial Automatic 1800W High Speed ​​​​Tana Dryer ho an'ny Toilet, Miarahaba antsika rehetra amin'ny mpanjifa sy namana mba hiantso antsika amin'ny lafiny tsara. Manantena ny hanao orinasa fanampiny miaraka aminao.
vidiny ambany orinasa China Automatic Hand Dryer sy Secador De Manos vidiny, Miantoka ny kalitaon'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo mpamatsy tsara indrindra, dia efa nampihatra ny fizotran'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny kalitao mandritra ny fomba fiasa. Mandritra izany fotoana izany, ny fidirana amin'ny orinasa maro isan-karazany, miaraka amin'ny fitantanana tsara indrindra, dia manome antoka koa fa afaka mameno haingana ny zavatra takinao amin'ny vidiny tsara indrindra izahay, na inona na inona haben'ny baiko.
Ny fikambanana dia manohana ny filozofian'ny "Be No.1 amin'ny kalitao tsara, miorim-paka amin'ny tantaram-bola sy ny fahatokisana ho amin'ny fitomboana", dia hanohy hanome mpanjifa teo aloha sy vaovao avy any an-trano sy any ampitan-dranomasina ho an'ny fanaraha-maso kalitao ho an'ny China Infrared Sensor Strong Airflow Hot Cool Wind Stable Wall Mounting Auto Hand Dryer, Ary afaka manampy ny faniriana ho an'ny vokatra rehetra amin'ny filan'ny mpanjifa izahay. Ataovy azo antoka fa manolotra ny fanampiana mahasoa indrindra, ny kalitao tsara indrindra, ny fandefasana haingana.
Fanaraha-maso kalitao ho an'ny China Sensor Auto Hand Dryer sy Speed ​​Jet Air Hand Dryers vidiny, miaraka amin'ny teknolojia ho fototra, mamolavola sy mamokatra entana avo lenta mifanaraka amin'ny filan'ny tsena. Miaraka amin'io foto-kevitra io, ny orinasa dia hanohy hampivelatra ny entam-barotra miaraka amin'ny soatoavina avo lenta ary hanatsara hatrany ny entana, ary hanolotra mpanjifa maro amin'ny entana sy serivisy tsara indrindra!
Fanamainana volo tsara indrindra amin'ny rindrina
Fanamainana volo mivalona
Tendrombohitra fanamainana volo
Mpiandry rindrina fanamainana volo
Fanamainana volo mihantona
Tady fanamainana volo azo averina